Mashiinka Foomka Weyn, Mashiinka Mashiinka, Gogosha Gogosha - YINGHE
Daabacaha Foomka Weyn
UV daabacaadda fidsan
Mashiinka daabacaadda calanka
Mashiinka daabaca ee guriga lagu isticmaalo
1 mashiinka daabaca madaxa
2 makiinado daabac leh
4 madax mashiinka daabacan
6 madax mashiinka daabacan
Qalabaynta goynta Desktop
Shirqoolka goynta dusha
Xarumaha Double mashiinka saxaafadda kuleylka
Furka mashiinka saxaafadda kuleylka
5 kiiba 1 mashiinka saxaafadda kuleylka
8 kiiba 1 mashiinka saxaafadda kuleylka kuleylka ah
3D Sublimation Vacuum Heat Press Mashiinka
4 midab iyo 4 mashiin daabacaadda shaashadda saldhigga
4 midab iyo 4 saldhig mashiinka daabacaadda shaashadda vernier
Mashiinka laminating kulul iyo qabow
Mashiinka dahaarka yar
Mashiinka dahaarka ah ee YH360
Mashiinka laminating YH460
Mashiinka dahaarka ah ee YH650
Mashiinka dahaarka kulul
Mashiinka dahaarka iyo goynta qabow
CO2 xardha Laser iyo magaabay
Fiber laser xardha iyo magaabay
Mashiinka kaarka iyo hadiyadaha
Mashiinka foornada kulul
Daabacaha kaarka PVC
Mashiinka xardha kaarka
Mashiinka buug gacmeedka lagu sameeyo buugga
Mashiinka sameeya albumka
Daabacaha Foomka Weyn ee Dijital ah
Laser Engrver Iyo magaabay
Sublimation Heat Press Mashiinka
Mashiinka Sameynta Albamka
Mashiinka Xafiiska & Qalabka
TAARIIKHDA YINGHE iyo qaabka ganacsiga: YINGHE ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD waa dukaanka kaliya ee silsilad qalabka guryaha ku leh oo leh shirkad ganacsi oo caalami ah oo bakhaarro xayeysiis ku leh xudduudaha. shirkadeena waxaa la aas aasay sanadkii 2002, kadib sanado badan oo horumarineed, YINGHE waxay noqotay aalad caan ah oo qalab casri ah oo gudaha iyo dibada ah oo ka tirsan shirkada casriga ah, baaxada shirkada, wax soo saarka iyo adeegyada dalka waa mid labaad. Wax soo saarkayagu sifiican ayaa looga iibiyaa in kabadan 200 oo wadan iyo gobolada aduunka.
Sidee loo ilaaliyaa madaxa daabacaha si macquul ah?
Maaddaama ay tahay qaybta ugu muhiimsan ee mashiinka daabacaadda inkjet, xasilloonida madaxa daabacadu waxay si aan toos ahayn u go'aamisaa tayada mashiinka. Marka qiimaha go'an ee madaxa daabacadu uu yahay mid aad u sarreeya, sida loo dheereeyo nolosha adeegga madaxa daabacaadda, loo yareeyo kharashka beddelka iyo heerka duugga, loona ilaaliyo madaxa daabacaadda si habboon.
Waa maxay farqiga u dhexeeya saldhigga biyaha ...
Khadka saliidda ku saleysan waa in lagu milo midabka saliidda, sida saliidda macdanta, saliidda cuntada, iwm. Khadku wuxuu u hoggaansamaa dhexdhexaadka saliidda dhexdeeda iyo uumiga qalabka daabacaadda; khad biyo ku saleysan ayaa u adeegsada biyaha inuu yahay qalabka wax lagu kala firdhiyo, khadkuna wuxuu ku yaalaa qalabka wax lagu daabaco Midabku wuxuu ku xiran yahay th ...
Afarta faa iido ee piezoelectric inkjet p ...
Sida aan wada ogsoonahay, tiknoolajiyada kuleylka kuleylka ah ayaa ku adkaatay suuqa weyn ee daabacaadda inkjet sanado badan. Xaqiiqdii, tiknoolajiyadda inkzoelectric inkjet waxay dejisay kacaan ku saabsan tikniyoolajiyadda inkjet. Waxaa lagu dabaqay daabacayaasha desktop muddo dheer. Iyadoo horumarin iyo biseyl ay ...
No.8 wadada gobolka, Baimibu Xiushui Industrial Park, 106 wadada gobolka, Renhe Town, Degmada Baiyun, Guangzhou, Shiinaha.